Posted by Thet Oo at 7:46 AM
သြော်...ဒိန်းမတ်လဲ ဘာသားနဲ့ ထုထားတာမှတ်လို့ ပြုတ်စော် နံနေပြီကိုးးးးးးးးးး
အားလုံး အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အဟဲ သီချင်းဆိုပြတာ။
မျှော်လင့်ရင်း လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်ကြတာပေ့ါဗျာ..
ဒါမျိုးက တသက်မှာ တခါ ဆိုသလို. ကိုယ့်လက်ထက်ကျမှ ကြုံကြိုက်ရပြန်တော့လည်း..
အို. ... အသင်လောက ... အဲ့လိုပဲ အော်လိုက်တော့မယ် အကိုရာ